चिनियाँ पर्यटकको विकल्प तयार हुँदैछ : मन्त्री भट्टराई
श्यामसुन्दर बिहिवार, माघ २३, २०७६, १०:२२:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । छिमेकी चीनमा फैलिएको नोवेल कोरोना भाइरस संक्रमणले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा असर परेको छ । नेपाल भ्रमण २०२० चलिरहेकै बेला छिमेकी चीनमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण भ्रमण वर्षको लक्ष्यमै चुनौती थपिएको छ । पोहोर चीनबाट तीन लाख पर्यटक नेपाल घुम्न आएका थिए । भ्रमण वर्ष २०२०मा त्यो संख्या ५ लाख पुग्ने अपेक्षा थियो, सरकारको । तर, अब सरकारले चिनियाँ पर्यटकको विकल्प खोज्नु पर्ने भएको छ ।
कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण चिनियाँ पर्यटक आउन नसक्ने देखिएपछि आफुहरुले त्यसको विकल्प खोजिरहेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले जनतापाटीलाई जानकारी दिए । उनले भने, ‘चिनियाँको ठाउँमा अन्य मुलुकमा बजार खोज्नु पर्ने देखियो । अन्त सुधार गर्ने र प्रचार–प्रसारका लागि त्यहाँ खर्च गर्ने रकम अब अन्तै खर्च गर्नु पर्छ ।’ तर, मन्त्री भट्टाईले पर्यटक भित्र्याउन चीनमा कति खर्च गर्ने लक्ष्य थियो भन्नेबारे जानकारी दिएनन् । उनले भने, ‘कुन मुलुकमा कति खर्च गर्ने भन्ने हुँदैन । टार्गेट भेट्टाउने हिसाबले खर्च गर्ने हो ।’
चिनियाँ पर्यटक नआउने स्थितिमा के गर्ने भन्ने विवरण तयार पार्न मन्त्रालयले एउटा कमिटी नै बनाएको मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्याय, नेपाल पर्यटन बोर्डका सीईओ, पर्यटन विभागका महानिर्देशक र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहितको एउटा कमिटी बनेको छ ।
मन्त्री भट्टराईले अगाडि भने, ‘त्यो कमिटीले अब २–४ दिनमा रिपोर्ट दिन्छ । चीनको साटो कहाँ–कहाँ खर्च गर्ने र बजार खोज्ने भनेर । त्यसपछि हामी त्यही अनुसार लाग्छौँ ।’ भ्रमण वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य छ । त्यो २० लाख मध्ये ५ लाख चीनबाट भित्र्याउने भन्ने थियो । चीनबाट पर्यटक घट्नेवित्तिकै बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा चहलपहल घट्ने देखिन्छ । बंगलादेशबाट पहिले थुप्रो पर्यटक आउने गरेका थिए । एयर बंगलाको विमान दुर्घटना पछि त्यो संख्यामा गिरावट आएको छ ।
भ्रमण वर्षलाई लिएर पर्यटनमन्त्री भट्टराई निकै व्यस्त छन् । उनले केही दिन पहिले मात्रै प्रदेशका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेका थिए भने मंगलबार मात्रै होटल एशोसिएशन नेपाल (हान)का पदाधिकारीसँग छलफल भएको थियो । चीनमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभावले पर्यटकहरु विचलित हुन थालेपछि व्यवसायीहरु आत्तिएका छन् ।
मन्त्री भट्टराईले बुधवार संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा समेत चिनियाँ पर्यटकको विकल्प खोजी भइरहेको सुनाए । उनले बैठकमा अब वैकल्पिक मार्केट खोज्न थालेको र विदेशमा कसरी राम्रो सन्देश दिने भन्नेमै ध्यान केन्द्रीत गरेको जानकारी दिए ।
केही दिन पहिले पर्यटन बोर्डले जारी गरेको वक्तव्यमा नेपाल ‘कोरोना भाइरस फ्री जोन’ भनेर उल्लेख गरेको थियो । त्यही कुरा मन्त्री भट्टराईले फेरि सुनाउँदै, ‘भोलिका दिनमा के हुन्छ भन्न सकिन्न । तर, आजका दिनसम्म हामीसँग एकजना पनि कोरोनाको बिरामी छैन । यसलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचार–प्रसार गर्न जरुरी छ’ भने । उनका अनुसार चिनियाँ राजदूतले समेत कोरोनालाई नियन्त्रण गरेर पुरानै अवस्थामा फर्किन्छौं भनेकाले आत्तिनु पर्ने अवस्था भने छैन । तर, चीनसँग सीमा जोडिएकाले अन्य देशबाट नेपाल आउने पर्यटकमा कोरोना भाइसरको त्रास छ । –पर्यटनमन्त्री भट्टराईसँगको कुराकानीमा आधारित
चिनियाँ पर्यटकको विकल्प तयार हुँदैछ : मन्त्री भट्टराई बिहिवार, माघ २३, २०७६, १०:२२:००
विश्व सम्पदा क्षेत्र वरपर अब ‘रक्सी’ र मासु बेच्न नपाइने पाशुपत क्षेत्रको वनकालीका यस्ता टहरा कोषले हटाएको छ । भण्डारेश्वर महादेव आसपासदेखि सिफल हुँदै जयवागेश्वरी र भुवनेश्वरी तथा चावहिल धन्देदय चैत्य आसपासका मांस–मदिरा पसल हटाउने शुक्रवार, माघ १०, २०७६, ०९:३२:००
प्रचण्ड–वामदेव धाउँदा पनि जनमोर्चाले किन मानेन उपसभामुख लिन ? अहिले उपसभामुखको पनि महत्व छ । उप–सभामुख संवैधानिक परिषदको सदस्य समेत हो । उसै परे केही दिन अघि डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले जस्तो अधिवेशन नै सुभारम्भ गर्न सक्ने देखियो उपसभामुखले । तर, चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुखैमा आएको उपसभामुख पनि छोड्यो । बुधवार, माघ ८, २०७६, ११:०५:००